समानुपातिकमा किन बसेनन् माओवादी शीर्ष नेता ? | Lifemandu
समानुपातिकमा किन बसेनन् माओवादी शीर्ष नेता ?
काठमाडौं ,असोज ३०। माओवादी केन्द्रले संघीय संसद् ९प्रतिनिधिसभा० का लागि पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायत पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेतालाई मात्रै समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ ।
वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा ९बादल० नेतृत्वको कार्यदलले गृहकार्य गरी अन्तिममा मुख्य तीन नेता बसेर बन्दसूची तयार पारेका थिए । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयावधिको अन्तिम समयतिर साँझ ५ बजे आयोग पुगेर माओवादीले सूची बुझाएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
नेता बादललाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउने गरी माओवादीभित्र सुरुमा चर्चा चले पनि उनले प्रत्यक्षमै निर्वाचन लड्ने बताएपछि उनको नाम समानुपातिक सूचीमा राखिएको छैन । दाहाल चितवन ३, थापा चितवन २ र श्रेष्ठ गोरखा २ बाट निर्वाचन लडाउने माओवादी योजना छ ।
नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, चक्रपाणि खनाललगायतलाई माओवादीले प्रत्यक्षमै उम्मेदवार उठाउने भएको छ ।
कर्णालीमा नेकपालाई दलको नेता छान्न सकस, कँडेल र शाहीको दाबी
कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका शीर्ष नेताबीच मत नमिल्दा संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेको छैन । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच पार्टी एकता भए पनि दलको नेता छनोटमा सहमति बन्न सकेको छैन । दलको न
स्थानीय निर्वाचनको मतका आधारमा शीर्ष नेता कति सुरक्षित ?
काठमाडौँ , कात्तिक ११ । निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको जोड(घटाउ सुरु भएको छ ।
समानुपातिकमा कांग्रेस–एमाले हाराहारी, कसको कति ?
काठमाडौँ , पुस २ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना करिब–करिब सकिएको छ । शनिबार रातिसम्ममा ९५ लाख ३ हजार ६ सय १८ मत गणना भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सर्लाही २ र ३ नम्बर क्षेत्रको